LibreOffice 7.0 haizosanganise chero vhezheni yakanyorwa kuti Yekutsikirira Yega | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 7.0 haizosanganise chero vhezheni yakanyorwa Yekuti Yega
Zvakanaka, isu tatova nemhedzisiro inofadza, sekutaura. Uye ndezvekuti muzvikamu zvakapfuura zvemutambo LibreOffice 7.0 paive nekufungirana: kutanga chinyorwa chisati chamboonekwa chakabuda ine chinyorwa "Yega Yega", gare gare kunonoka kusvika kweiyi tag kugadzirira nharaunda nekusvika kwayo uye, mune inoita kunge chikamu chekupedzisira, Iyo Gwaro Foundation yasarudza kusaiisa mune chero zvigadzirwa zvayo.
LibreOffice 7.0 inoenderana negore regumi regore reprojekiti rave iro rakanyanya kushandiswa hofisi suite paLinux, uye yakanakisa imwe nzira kuMicrosoft Office kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chemahara. Ichitora iyo nguva, Iyo Gwaro Sisekelo yakafunga kuvhura chirongwa chekushambadzira kugadzirisa zvinhu, pakati pazvo zvinoita sekunge paine masevhisi akakosha kana rutsigiro ruchazowanikwa pasi pekunyoreswa. Aya mabhenefiti angafarirwa nevashandisi ve Enterprise Shanduro.
0 shanduko muLibreOffice 7.0 yemushandisi akajairwa
Chikwata chakabuda pa Welcome screen, saka muLibreOffice 7.0 RC tinogona kuona chimwe chinhu senge chauinacho pamusoro pemitsara (kuburikidza Reddit). Mazuva ano chimwe chinhu chakafanana chinowoneka chisina chitaera icho, chiri nani zvikuru kubva pakuona kwangu uye nekwenzanga. Naizvozvo, sekutsanangura kunoita Mike Saunders mu yazvino blog posvo yeprojekti, vafunga kudzosera shanduko uye kudzokera kune zvinoonekwa muv6.4.
Kunyangwe Saunders achinyatsotaura nezveVanoburitswa Vanodaidzwa, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti, kana rakadzikama vhezheni yeLibreOffice 7.0 yaburitswa, chitambi hachizowoneka kana. Iyo chirongwa chekushambadzira chavakagadzirira chichagara makore mashanu (2020-2025), saka hazvirambwe kuti vachachinja pfungwa zvakare mumakore mashanu anotevera, asi zvinoita sekunge chavachaita kusiya vhezheni ichitsigirwa nenharaunda (mushandisi) zvakangofanana uye kuti ivo ichawedzera iyo Enterprise Edition label iyo yakabhadharwa vhezheni. Imwe sarudzo ndeyekuti ivo vanowedzera tag yeiyo yakajairika vhezheni, asi ichave yeKudyidzana Edition uye zvinoramba zvichionekwa kana vachizopedzisira vakuwedzera pane imwe nguva.
Chero zvazviri, iyo suite inoshanda zvakangofanana chero iwe yaunodana iyo, saka tinogona kuva nechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 7.0 haizosanganise chero vhezheni yakanyorwa Yekuti Yega
Iyo vhezheni ine rutsigiro rwemabhizimusi / hurumende / zvikoro yanga isiri zano rakaipa reiyo Iyo Gwaro Foundation kuburitsa imwe mari.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yakavharwa «LO premium» haina kumbofungidzirwa nezvayo.
OpenOffice 6 yakafanana neHofisi XP. Hapana chekuitira shanje.
Anthony Romero T. akadaro
Hofisi yakavhurika yagara yakanaka
Pindura kuna Antonio Romero T.
Slimbook ine matoyi matsva anonakidza ane AMD
Microsoft ProcMon - Maitiro Monitor eLinux